मिज एजुकेशन पोडकास्टमा ब्लक आयोजनाizing डचटाउनस्टाईल.आर.डब्ल्यू • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
MizE शिक्षा पोडकास्टमा आयोजक रोक्नुहोस्
प्रकाशित मार्च 6th, 2021
के तपाईंले सुन्नुभयो? MizE शिक्षा, नयाँ डचटाउन-आधारित पोडकास्ट? डचटाउनका छिमेकीहरू लाटाशा स्मिथ र स्टेसी लिन्डसेले साप्ताहिक पोडकास्टको आयोजना गरेको छन जुन सेन्ट लुइस शहरका बासिन्दाहरूको लागि सबै किसिमका मुद्दाहरूको छलफल गर्दछ।
पोडकास्टको भर्खरको एपिसोडमा, MizE शिक्षा जोएल Silliman संग बोले, मा ब्लक कप्तान 4200२०० लुइसियानाको ब्लक र प्रयास को नेता को एक डचटाउनमा ब्लकहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। जोएल, टाशा, र स्ट्यासीले उनीहरूको ब्लक आयोजन प्रयासहरूको उत्पत्ति, के काम गरेको छ र के गर्दैन, र कसरी वरिपरिका वरिपरिका र बाहिरका मानिसहरूले आफ्नो छिमेकीहरू सशक्त समुदाय निर्माण गर्न कार्य गर्न सक्दछन् भनेर छलफल गरे।
म कसरी मेरो ब्लक व्यवस्थित गर्ने?
त्यसो भए के तपाइँको ब्लक व्यवस्थित गर्न यसले के लिन्छ? हामीले सँगै राखेका छौं डोऱ्याउन तपाईंलाई आफ्नो छिमेकीहरूसँग कुराकानी गर्न मद्दत गर्न, उनीहरूसँग कुराकानी गर्न र स engaged्लग्न राख्नुहोस्, र वरपरका स्रोतहरूमा प्लग गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई सुरूमा थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, जोएल र अन्य स्वयंसेवकहरू तपाईंलाई प्रक्रियामा हिंड्न मद्दत गर्न तयार छन् र तपाईंको ब्लकको आवश्यकताहरू अनुकूल गर्न।
तपाईं ब्लक आयोजन को बारे मा अधिक पाउन को लागी र मा हाम्रो आयोजकहरु लाई पुग्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/blocks.
म MizE शिक्षा पोडकास्ट कहाँ पाउन सक्छु?
नयाँ एपिसोडहरू MizE शिक्षा हरेक हप्ता बाहिर आउनुहोस् तपाईं सुन्न र सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ Spotify, Apple Podcasts, जेब, र Google पोडकास्टहरू। विगतका एपिसोडहरूमा सेन्ट लुइसका मेयर उम्मीदवार तिशौरा जोन्स र कारा स्पेन्सर, साल मार्टिनेजका साथ छलफल भएको थियो। रोजगार जडान र उपचार हिंसा, र हिदर फ्लेमिंग उद्देश्य शैक्षिक सेवाहरूमा। धेरै नयाँ शीर्षक र पाहुनाहरू बाटोमा छन्!
तल दायर गरिएको ब्लक. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. ब्लक. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो मार्च 6th, 2021 .
DutchtownSTL.org ब्लक MizE शिक्षा पोडकास्टमा आयोजक रोक्नुहोस्
अंग्रेजी (English) • español (Spanish) • Tiếng Việt (Vietnamese) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • Bosanski (Bosnian) • 简体 中文 (Chinese) • Français (French) • ဗမာ စာ (Burmese) • नेपाली (Nepali) • Afsoomaal को (Somali)